Mpizahatany vahiny nogadraina noho ny familiana an'i Atacama Giant malaza any Chile
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Mpizahatany vahiny nogadraina noho ny familiana an'i Atacama Giant malaza any Chile
Mpizahatany vahiny telo izay nandeha fiara nitety ilay Giant Atacama malaza no hita fa meloka noho ny fahasimbana tsy azo sitranina tao amin'ny tsangambaton'i Chili.
Atacama Giant dia hieroglyph goavambe amin'ny endrika sary an-tsokosoko an'ny olona iray any an'efitra Atacama. Izy io dia heverina ho iray amin'ireo lehibe indrindra sy lehibe indrindra eto an-tany - mihoatra ny 85 metatra ny halavany, ary sivy arivo taona no tombanana ny taonany. Avy amin'ny rivotra ihany no ahitanao azy manontolo.
Nilaza ny manampahefana Shiliana fa teratany belza iray sy mpizahatany roa miaraka amin'ny zom-pirenen'i Belzika sy Shiliana no nandeha nitety ilay goavambe tamin'ny fiara. Vokatry ny dia, nisy soritra sisa tavela teny aminy, ary nilaza ny manampahefana Shiliana fa tsy azo ivalozana ny fahasimbana naterak'ilay goavambe. Ireo voafonja rehetra dia voaheloka higadra telo taona sy onitra enina tapitrisa pesos (9,000 $ mahery). Hatao sesitany ny teratany belza iray rehefa nandoa onitra.
Emirates dia manomboka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny vaovao ao amin'ny seranam-piaramanidina FCO Rome
Ny Singapore Airlines dia nampiakatra ny fahita matetika Johannesburg